Lalana « Digue » : Mpangalatra akoho roa nitsoraka maty tao Ikopa
Mpangalatra akoho amam-borona teny amin’ny tanàna ampitan’ny lalana « Digue » no nitsoraka namoy ny ainy tao amin’ny ranon’Ikopa, omaly tolakandro.
Nifanenjehan’ny fokonolona izy ireo, ka andeha hiampita ny ranon’Ikopa no nilentika. Vatana mangatsiaka sisa no nalain’ireo mpamonjy voina avy ao anaty rano rehefa nokarohina ora roa sy sasany, tokony ho tamin’ny 6 ora sy sasany hariva, omaly.
« Nangalatra akoho sy vorona avy any amin’ireo tanàna amin’ny manodidina ny sampanan’ Ambohitrimanjaka ireo roa lahy ireo ka nifanenjehan’ny olona. Akoho iray efa maty no mbola hita teo amoron-drano niampitan’izy ireo, niaraka tamin’ny akanjon’ny iray izay navelany teo. Nikasa ny hiampita ny ranon’Ikopa izy ireo hitsoaka, saingy tsy nahay nilomano ka nilentika, tokony tamin’ny 3 ora hariva », hoy Rasolofonirina, isan’ireo nahita ny zava-nitranga teny amin’ny « Digue » omaly.
Nandrasana tamin’ny tapa-biriky
Mpamonjy voina telo no tonga teny an-toerana, minitra vitsy taorian’ny niantsoana azy ireo. Nidina anaty rano avy hatrany izy ireo nanomboka nikaroka ireto roa lahy ireto. « Naharitra ny fikarohana ka tsy maintsy niantso mpanampy izahay », hoy ireo mpamonjy voina teny an-toerana.
Tokony ho tamin’ny 4 ora no tonga ny mpamonjy voina fanampiny ka nanao izay fomba rehetra nikarohana ireo olona ireo.
Hatramin’ny omaly nahitana ny razana dia tsy mbola fantatra ny mikasika ireto olona roa ireto. Tsy mbola nisy nitonona ho fianakavian’izy ireo ihany koa. « Betsaka izay akoho amam-borona efa very tety aminay izay. Efa an-tanimbary no akan’ireo mpangalatra ireo biby fiompinay. Tamin’ity indray mitoraka ity dia nisy nahita izy ireo ka niantso vonjy. Niray hina ny fokonolona ka nanenjika daholo. Efa nisy niandry tamin’ny tapa-biriky teny amoron-drano », hoy ireo mponina eny amin’ny sampanana Ambohitrimanjaka.